Iinkonzo zokufota kwiRealWW
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory IiNkonzo zoPapasho
EFlorida eFlorida (Uruguay)
umbono IiNkonzo zoPapasho ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
Ezona zisasaziweyo iindaba zisasazwa ngabathengisi beentengiso. Isetyenziselwa indlela evulekileyo kunye nokutsala, ishishini, amandla kunye nokusingqongileyo, ukuzonwabisa kwasekhaya kunye nemidlalo, imigaqo-nkqubo yoluntu kunye nomdla.
E papashwe ngu jenny davis
umbono IiNkonzo zoPapasho ishicilelwe I-2 iminyaka edlulileyo
Photography Ngaba isayensi, ubugcisa, usetyenziso kunye nokuziqhelanisa nokwakha imifanekiso eqinileyo ngokurekhoda ukukhanya okanye enye imitha yombane, nokuba kungenziwa ngombane nge sensor yomfanekiso, okanye ngekhemikhali ngesixhobo esinobukhaphukhaphu njengefilim yifoto.  Ngokwesiqhelo, Iilensi isetyenziselwa ukujonga ukukhanya okubonakalisiweyo okanye ukukhutshwa kwizinto ukuya kumfanekiso okwenene kumhlaba obuthathaka ukukhanya ngaphakathi kwikhamera ngexesha lokuvezwa kwexesha. Ngomfanekiso we-elektroniki sensor, oku kuvelisa intlawulo yombane kwi-pixel nganye, eqhutywa ngombane kwaye igcinwe kwifayile yemifanekiso yedijithali ukuze ibonakaliswe okanye ilungiswe kamva. Iziphumo nge-emulsion enefoto ngumfanekiso obonakalayo ongabonakaliyo, kamva othi "uphuculwe" ngekhemikhali ube ngumfanekiso obonakalayo, nokuba ngowokungabi nanto okanye ulungileyo ngokuxhomekeka kwinjongo yezinto ezinemifanekiso kunye nendlela yokusebenza. Umfanekiso ongemuhle kwifilimu ngokwesiko isetyenziselwa iifoto ukwenza umfanekiso ochanekileyo kwisiseko sephepha, owaziwa njengoprintayo, nokuba usebenzisa i-engerger okanye ngokuprinta. Ukufota kuqeshwe kwiinkalo ezininzi zesayensi, ukuvelisa (umzekelo, ifotolithography), kunye neshishini, kunye nokusebenzisa ngokuthe ngqo kubugcisa, ukuvelisa ifilimu kunye nevidiyo, iinjongo zokuzonwabisa, umdlalo ozonwabisa, nonxibelelwano ngobuninzi.